Zvinyorwa | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Ndeapi magwaro anodiwa kuti apinde muIsraeri kubva kuRussia?
Ndeapi magwaro anodiwa kuti apinde muIsraeri kubva kuRussia? Pasipoti (inosvitsa kwete pasi pemwedzi ye6) dzimwe nguva mathikiti okudzoka anokumbira chipiro chekubhadhara uye mamwe magwaro anosimbisa solvency yemakopi epasipoti wawakabhururuka ...
chii chaunoda kuti uwane visa muSpain ?? uye yakareba kwenguva yakareba sei?
chii chaunoda kuti uone visa muSpain ?? uye yakareba kwenguva yakareba sei? Svondo uye zvishoma zvinyorwa pamberi pevanhu vanoziva, ndiani angaronga. Pasipoti, inoshanda zvisingaiti 3-x mwedzi mushure me ...
Ndinofanira kunyora kero yangu muchiChirungu. Ndeipi nzira yekunyora?
Ndinofanira kunyora kero yangu muchiChirungu. Ndeipi nzira yekunyora? Chelyabinsk region. Nagaibak district. musha weFerschampoise. mumugwagwa makashandisi mumba 38 flat 9. Brayer Yuri Andreevich. Postal code 457650 Country, city, ...
Ndinoda pasipoti yekufamba kubva kuMoscow kuenda kuKaliningrad uye kumashure?
Ndinoda pasipoti yekufamba kubva kuMoscow kuenda kuKaliningrad uye kumashure? Zvinoshamisa. Kuita rwendo rwenguva imwe chete nevarimi veRussia vasina visa yeRepublic of Lithuania, pakati peKaliningrad uye neRussia yose ...
Chii chinonzi Multivisa?
Chii chinonzi Multivisa? Pamusoro pehuwandu hwekare hwakapindurwa. uye sezvo vamwe vakanyora zvisina maturo zvakakwana, ini ndichapindura mibvunzo yakasara)) Kwekanguva panguva yekuziva kwema embassy chaiwo. kakawanda ...
Ndinoda pasipoti yekupinda kuGeorgia?
Ndinoda pasipoti yekupinda kuGeorgia? ... inofanirwa .. haisi nhengo yeCIS .. Nokuda kwekupinda muGeorgia kwevaRussia kwenguva isina kupfuura 90 mazuva, visa haitariswi. Panoyambuka muganhu ...
Ndezvipi zvinyorwa zvinodiwa kuti uende nechitima kuKaliningrad kubva kuMoscow uye kumashure?
Ndezvipi zvinyorwa zvinodiwa kuti uende nechitima kuKaliningrad kubva kuMoscow uye kumashure? hongu iwe ndiwe munhu uyo? kuenda kuRussia kuenda kuRussia, uye kunyange zvimwe zvinyorwa zvekufambisa? pasipoti ...
Zvinotora nguva yakareba sei kuwana pasipoti mushure mekuchinja zita rangu?
Zvinotora nguva yakareba sei kuwana pasipoti mushure mekuchinja zita rangu? Zvinoratidzika kunge zvakafanana nepasipoti yeRussia uye pane imwe mwedzi kupa nguva yekuchinja! Iye pachake akaroora gore iroro, akamushandura zita rake, asi ...
Chii chiri e-tiketi? Chii chiri e-tiketi yekambani, kuitora sei, chii chaunoda kuita nayo shure?
Chii chiri e-tiketi? Chii chiri e-tiketi yekambani, kuitora sei, chii chaunoda kuita nayo shure? Iwe unobhadhara tikiti kune konsati kana kushanda kuburikidza neInternet. Zvino uya ...
Ndezvipi zvinyorwa zvinodiwa kuti uwane pasipoti yemwana muduku
Chii Zvinyorwa vanosungirwa kuwana pasipoti kuti mwana muduku gugkak kutarisa Websites kana www.gosuslugi.ru www.fms.ru Modern mitemo Russian anopa kodzero mwana muduku kuti pachako pasipoti yavo dzakazvimirira kufamba mu ...
Ndingaita sei kuti ndione kana nyaya yekutonga yakaiswa kwandiri?
Ndingaita sei kuti ndione kana nyaya yekutonga yakaiswa kwandiri? iwe haugone ... enda kuInternational Affairs Directorate ipapo uye ona = =) uyo anoziva nzira yekuziva nezita kana ini ndichine muedzo. Kana ...
uye kutengesa kwemaikiriti emagetsi kudii yepawebhidhiyo yakazaruka nemaawa mangani?
uye kutengesa kwemaikiti emagetsi paiwebsite yezvitima kunotora maawa mangani? Ndakazarura nzvimbo iyi mu 7-40 muMoscow, pakanga pasati yava 8, kutengesa kwetikiti kwakanga kwave kuenderera mberi, uye matikiti evhidhiyo haasisiri ...
ndicho chiwi chikuru pane zvose pasi pose
ndicho chiwi chikuru pane zvenyika 10 zviwi zvakakura munyika yose Top 10 zviwi zvikuru pane zvenyika, maererano nekat de.com. Ichi chitsuwa inyika yenyika, yezvakabva, yakakomberedza kumativi ose ...
Ichatora nguva yakareba sei kuwana visa kuItaly?
Ichatora nguva yakareba sei kuwana visa kuItaly? Kugadziriswa kweVisa ikozvino kunotora 3 mazuva ekushanda, kana uri iwe pachako kumusangano kana ambassy ane kukokwa. Asi vanoti iyo yakawanda ...
Chii chinonzi "zuva rakasununguka" rinoreva kureva ndege-kuruka ndege? Kana iwe usingazivi nguva yaunenge uchidzoka, zviri nani kutenga tikiti nezuva rekudzoka rakazaruka. Vhura ...
Ndichada pepipoti kuti ndiende kuUkraine mugore re 2016
Ndingada pipoti yekuenda kuUkraine mu2016 here? Hongu, kupinda muRussia, Russia inoda pasipoti. Kuti uende kuUkraine, unoda pasipoti, nokuti muchiedza che ...
purogiramu yebasa. kubhabhatidzwa kwepasipoti
purogiramu Visa dhipatimendi pamusoro Vyborg. Harisi Pfungwa vemamwe pasipoti Visa Office, uye Federal Kutama Service. Mudane: Federal Kutama Service of Vyborg woruwa Vyborg, st. Herbal, d. 26 (81378) 508-11, 8- (813-78) -5-07-63 http://vbgcity.ru/?q=ru/node/3583 mumirau MUTORWA ...
Kwemakore mangani vana vanotengesa matikiti ezvitima vakatengeswa uye nezvehuwandu hwepakati pehuwandu huri shoma kudarika vanhu vakuru?
Kwemakore mangani vana vanotengesa matikiti ezvitima vakatengeswa uye nezvehuwandu hwepakati pehuwandu huri shoma kudarika vanhu vakuru? Mitemo yekutakura kwevana Pamusoro pehurumende yeRussia Federation kubva ku2 March 2005 gore 111 "On ...
Ungadhinda sei tekiti yemagetsi yeAeroflot?
Ungadhinda sei tekiti yemagetsi yeAeroflot? Tumira iyo yakagamuchirwa Aeroflot faira ku PRINTER ... neboka kubva kuhofisi yakanyoreswa yekambani, kana kubva pasipo iyo yakasvika kuvimbiswa kwekutengesa kwepainternet .... flash ...
Sawa, Ndekupi kuribhadharira mari yekubhadharira vhiza yeAmerica?
Sawa, Ndekupi kuribhadharira mari yekubhadharira vhiza yeAmerica? Kubhadharwa nemari kuburikidza nemabhanki Mumwe nomumwe anoshanda anofanira kubhadhara mari yebhadharo mune rimwe rebazi re Raiffeisen Bank. Mariro inowanikwa mumari. Iwe unoda kuzadza bhangi ...
Mibvunzo ye82 mu database yakagadzirwa mu 0,528 masekondi.